Potes Cantabria, renivohitry ny faritra kanton'i Liébana | Vaovao momba ny dia
Luis Martinez | | Tanànan'ny Espana
Potes, Cantabria, dia toerana fizahan-tany malaza nefa mahavariana. Eo afovoan'ny Faritra Liébana, eo am-pototry ny tendrombohitra Peña Sagra y Peña Labra amin'ny lafiny iray sy ny hamaroan'ny Peaks ao Eoropa ho an'ny hafa. Amin'ny farany indrindra dia ny Renirano Quiviesa, izay mikoriana mankany amin'ny Deva any amin'ny haavon'ny tanàna.
Fa ambonin'izany rehetra izany dia kely i Potes villa mihaja ny arabe cobbled sy tery dia tonga hatrany amin'ny morontsiraka amin'ny alàlan'ny mahavariana Hermida Gorge. Manana tsangambato marobe izy ary, toy ny hoe tsy ampy izany rehetra izany, miaraka amin'ny gastronomia miavaka sy mahery. Raha te hahafantatra an'i Potes ianao, any Cantabria, mamporisika anao izahay hanaraka anay amin'ny dia ataonay.
1 Inona no ho hita any Potes, Cantabria
1.1 Fiangonan'i San Vicente
1.2 Ny Torre del Infantado, tandindon'i Potes
1.3 Tsangambato hafa an'ny Potes, Cantabria
2 Inona no ho hita sy atao any amin'ny manodidina an'i Potes
2.1 Monasiteran'ny Santo Toribio de Liébana
2.2 Fuente Dé, ny fijerena ny Cable ary ireo zotram-tendrombohitra
3 Inona no hohanina ao Potes
4 Ahoana ny fomba hahatongavana any Potes, Cantabria
Inona no ho hita any Potes, Cantabria
Ny faritra Liébana iray manontolo dia manana hatsarana voajanahary miavaka sy tsangambato mahatalanjona. Ny sasany amin'ireto farany dia mifantoka ao Potes ary, amin'ny manodidina azy, ampahany tsara amin'ny teo aloha ihany koa. Andao hofantarintsika tsara kokoa izany rehetra izany.
Fiangonan'i San Vicente
nanambara ny Tsangambato ara-javakanto manan-tantara, ity fiangonana tsara tarehy ity dia mamaly ny endrika maritrano isan-karazany. Izany dia satria natsangana teo anelanelan'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX. Noho io antony io dia niova ny endriny nanomboka tamin'ny Gothic ka hatramin'ny Renaissance ary Baroque.
Etsy ivelany, ho totohondry ianao lakolosy, raha, ao anatiny, ianao dia afaka mahita naves roa mizara fizarana rakotry ny valizy valida. Kapila lehibe iray toradroa nosarahana tamin'ireo teo alohan'ilay andohalambo nandresy sy sakristy iray namita ilay toerana sarotra.
Ny Torre del Infantado, tandindon'i Potes
Ity fanamafisana naorin'ny fianakaviana Lama tamin'ny taonjato faha-XNUMX ity Tello an'ny Castile, rahalahin'ny Mpanjaka Henry II. Saingy ny fisehoany ankehitriny dia noho ny fanavaozana nanirahana ny Duke of Infantado ao amin'ny XVI. Izany no mahatonga azy ho toa a Trano fanaovana Italiana tena mitovy amin'ny olon-kafa tamin'izany fotoana izany.
Efa nambara Fananana tombotsoan'ny kolotsaina ary amin'izao fotoana izao dia natokana ho an'ny fampiratiana. Amin'ny maha-tantara an-tsary azy, holazainay aminao fa an'i Íñigo López de Mendoza, ilay malaza Marquis of Santillana, izay raisina ho iray amin'ireo poeta medayval espaniola be.
Tsangambato hafa an'ny Potes, Cantabria
Ny roa teo aloha dia ireo tsangambato miavaka indrindra an'i Potes. Fa misy olon-kafa mahaliana ihany. Azonao atao ihany koa ny mitsidika ny hermitages La Virjin'i Valmayor ary ny Virjiny làlana.
Ary koa, eo akaikin'ny Torre del Infantado dia manana fananganana hafa miendrika trano mimanda ianao Ny sofin'i Lama, Linares, Calseco y Osorio. Ary aza mitsahatra mijery ny taloha tetezana toy ny any San Cayetano sy ny fonja. Fa koa, Potes rehetra dia tsara tarehy. Mandehana ny Tanàna manodidina, miaraka amin'ireo araben'orinasa sy tranony taloha hanaporofoana izany.
Inona no ho hita sy atao any amin'ny manodidina an'i Potes
Fahotana ny mandeha any Potes ary tsy mahalala ny manodidina azy koa. Satria, raha tsara tarehy ny tanànan'i Lebaniega, vao mainka mahavariana kokoa izy io rafitra voajanahary. Tsy izany ihany fa misy ihany koa lova tsara vakoka tsangambato akaikin'i Potes, anisan'izany ny fametrahana monasiteran'ny Santo Toribio de Liébana.
Monasiteran'ny Santo Toribio de Liébana
Ho hitanao ity monasitera Franciscan ity ao amin'ny kaominina Chameleno, ao anatin'ny faritra Liébana ihany. Ny fototra iorenany dia natokana ho an'ny evekan'i Palencia antsoina hoe Toribio izay niaina tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Na izany aza, Toribio iray hafa io, avy any IV, izay hanome ny anarany azy rehefa nafindra tao ny fatiny.
Na izany aza, ny mponina malaza indrindra ao aminy dia ilay antsoina hoe Beatus an'i Liebana, izay nanoratra ny bokiny tao ary noheverina ho iray amin'ireo manam-pahaizana lehibe tamin'ny androny, tamin'ny haavon'ny olona toa an'i Alcuino avy any York.
Ny trano manan-danja indrindra amin'ny monasiteran'ny ny fiangonana, izay manambatra ny fomba Romanesque sy Gothic. Ny iray amin'ireo trano fiangonana anatiny, dia ny Baroque, no misy ny Lignum Crucis. Ity anarana ity dia omena ho an'ny sisan'ny hazofijaliana izay nanomboana an'i Jesosy Kristy. Ho fanampin'izay, ny Varavaran'ny famelan-keloka, izay manokatra isaky ny taona Jobily mba handraisana mpivahiny.
Etsy ankilany, eo akaikin'ny monasitera dia azonao atao ny mitsidika ny Zohy masina, tranobe miorina alohan'ny Romanesque nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary miharatsy ankehitriny. Inoana fa tao no nisotroan-dronono ny mpanorina ny monasiteran'ny fanaovana fivalozana.
Fuente Dé, ny fijerena ny Cable ary ireo zotram-tendrombohitra
Fitsidihana iray hafa izay atolotray anao hataonao any amin'ny manodidina an'i Potes dia ny Loharanon'ny. Ao amin'ity tanàna kely ity dia tsy maintsy mandray ianao tariby tariby izay manome anao fomba fijery mahavariana momba ny Picos de Europa ary mahatratra ny Mirador del Cable. Miampita eran-jato metatra eo ho eo izy ary tsy maharitra efatra minitra vao hahatratra ny haavon'ny 1847.
Fiara tariby Fuente Dé
Raha vao miakatra dia afaka mahita tontolo mahafinaritra ihany koa ianao. Fa, ankoatr'izay, dia mahatalanjona fidirana amin'ny massif afovoan'ny Picos de Europa ny tenany, izay ahafahanao manao làlana fitsangantsanganana mahatalanjona. Ohatra, ilay mankany Alto de la Triguera, ny Ny lalan'i Aliva, ny an'ny Lakandranon'i Jedunda na ny boribory manodidina an'i Peña Remoña.
Inona no hohanina ao Potes
Araka ny efa nolazainay taminareo teo aloha, Potes dia manolotra gastronomie mahery vaika sy matsiro ihany koa. ny rebana lebaniego, izay vita amin'ny akoho, voaroy, ovy ary ny fomban-drazana compango henan-kisoa (chorizo, saosisy ra, bacon ary ham). Ary farany, ianao dia manampy henan'omby sy fofonaina, koba poti-mofo, chorizo, atody ary persily.
Amin'ity lovia ity dia manana mihoatra ny ampy ho an'ny sakafo tsara ianao. Fa azonao atao koa ny manandrana ny trondro na ny Salmon ny renirano Deva sy tsindrin-tsakafo toy ny antsoina hoe fromazy avy any Liébana na ny Fromazy Picón sy Tresviso.
Raha hampidina ny sakafo be dia be toy izany dia tsy misy tsara noho ny pomace eo an-toerana, be mpitia ary manana fety aza. Ny faran'ny herinandro faharoa amin'ny volana novambra ary efa nambara Fahalianan'ny mpizahatany isam-paritra.
Ahoana ny fomba hahatongavana any Potes, Cantabria
Ny fomba tokana hahatongavana any Lebaniega dia amin'ny alalàn'ny lalambe. Misy ny bus izay manao io zotra io, saingy manoro hevitra anao izahay handeha amin'ny fiaranao manokana, amin'ny hafainganam-pandehanao. Raha mandeha avy any avaratra ianao dia tsy maintsy miala ao A-8 amin'ny haavon'ny Unquera maka ny N-621 izany, araka ny nolazainay taminao, dia mamakivaky ilay mahavariana Hermida Gorge ary hitondra anao mivantana any Potes ianao.
Fa kosa, avy any atsimo dia azonao atao ny mivezivezy A-67. Fa ny lalana fohy indrindra dia ny N-625 ny León and up Riaño ary avy eo raiso ny N-621 amin'ny lafiny Castilian.
Ho famaranana, Potes, any Cantabria, dia a villa tsara tarehy tsara tarehy feno tsangambato sy miaraka amin'i manodidina nofinofy. Raha izany rehetra izany dia ampianao ny gastronomie matsiro, manana ny singa rehetra ianao hanapahana hevitra hahafantatra azy. Tsy mahatsiaro tena manao an'io ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Potes, Cantabria